Dadka cuntada qaata iyo mutadawiciinta ayaa lagu iftiimiyay sheekada MPR ee kalinimada - Cunnooyinka ku socda wheels
Cunto qaatayaasha iyo mutadawiciinta ayaa lagu muujiyey sheekada MPR ee kalinimada
“In ka badan oo keliya cunto” ayaa muddo dheer halhays u ahayd Cunnooyinka Dhirta. Doorka muhiimka ah ee mutadawiciinteena gaarsiinta ay ka ciyaaraan nolosha dadka qaata cuntada ayaa dhowaan lagu muujiyay a sheeko weyn oo ku saabsan saameynta caafimaad ee kalinimada oo ka socda Raadiyaha Dadweynaha ee Minnesota.
Qoraaga sheekada, Tom Weber, wuxuu waqti ku qaatay inuu raaco raashin mutadawiciin ah oo laga cunteeyo Cuntada CEAP ee Wheels gudaha Park Park. Muxuu waqtigiisa la qaatay mutadawiciinta Steve iyo Judy Jones wuxuu ahaa sida ay muhiimka u tahay barta bulshada ee ay bixiyaan mutadawiciintu inay u noqon karto dadka cuntada qaata.
Qoraalkani wuxuu si gaar ah u iftiiminayaa waxa booqashada saaxiibtinimo maalin kasta keeni karto:
Ka dib nolol mashquul ah oo ka shaqeysa General Mills iyo korinta carruurta, oo ay ku xigto sannado mutadawacnimo ah oo hawlgab ah, Donald Lange wuxuu helayaa wax yar oo wareer ah xaqiiqda ah inaysan u ahayn bulsho sidii ay ahaan jireen.
"Waxaan jeclaan lahaa inaan wax badan iskaa wax u qabso ku qabanno, laakiin waa inaad barataan inaad aqbashaan," ayuu yiri. "Ma dareemayo gabow ilaa aan gaaro 80."
Langes-ka, Cunnada bixinta Wheels-ka waxay ku saabsan tahay “taabashada kaliya ee aan la leenahay dadweynaha mar dambe. Waxaan rajeyneynaa maalin walba. ”
Urur sida Cunnooyinka Lugaha Laydhka ah, ujeeddadu maaha oo keliya bixinta cuntada kulul. Gaarsiinta ayaa fursad u ah tabaruceyaasha inay iska hubiyaan kuwa kale oo laga yaabo in haddii kale aysan qof arki karin maalin la siiyay.
Sida sheekadu muujineyso, cilmi baarista sii kordheysa waxay soo jeedineysaa in saameynta xun ee kalinimada ay gaari karto meel ka baxsan caafimaadka maskaxda qofka. General Vivek Murthy oo ahaa dhakhtarkii hore ee dhakhaatiirta qaliinka maraykanka ayaa sheegay in kalinimada oo daba dheeraata ay saameyn la mid ah ku yeelaneyso caafimaadka qofka sida cabida 15 sigaar maalintii.
Sheekadu waxay ka kooban tahay ilo aad u tiro badan oo loogu talagalay dadka laga yaabo inay la kulmaan kalinimo waxayna si muhiim ah u xusayaan inaysan kaliya dhibaato ku ahayn dadka waaweyn. Waan ku faraxsanahay ilahaani inay jiraan waxaanan si joogto ah ugu mahadnaqaynaa dhammaantiin oo aad ula dagaallameysa kelinimada si joogto ah adoo ku tabarucaya Cuntooyinka Gawaarida!
Halkan ka aqri sheekada MPR oo dhameystiran.
Haddii adiga ama qof aad jeceshahay ka faa'iideysan karaan cunnooyinka nafaqada leh iyo booqashada saaxiibtinimo ee iskaa wax u qabso, iska qor halkan Cuntada Lugaha. Hadaad jeceshahay inaad sameyso qaybtaada si aad uhesho kalinimada bulshadayada, is qor si aad tabaruc ugu hesho halkan.
Dhibcaha sawirka lagu soo bandhigay boostadan: Evan Frost, MPR News